China Soft skin-friendly round sponge makeup loose powder puff Manufacturer and Supplier | Dongmei
Soft akpụkpọ-enyi na enyi gburugburu ogbo etemeete rụrụ ntụ ntụ puff
Ihe: A na -eji afụfụ puff mee ntụpọ, mmetụta dị nro na ntụpọ ， nwere ike bulie ma jidekwa ntụpọ dị larịị, ntụ ntụ, na ntụ ntụ ahụ nke ọma, dị mfe itinye n'ọrụ n'otu oge, ị gaghị efufu ntụ ntụ gị ọzọ.
Nhazi: A haziri nnukwu ahụ afụ ahụ na -enye ohere maka njikwa na ịchekwa ya, nnukwu nha nwere ike ime ka ịgwakọta ntụ ntụ banye na akpụkpọ ahụ ngwa ngwa na mfe.
Ngwa: Enwere ike iji puff ntụ ntụ mee ma ụmụaka ma ndị okenye ihu & ahụ, ụdị akpụkpọ anụ ọ bụla, mmanụ, akọrọ, agaghị akpasu iwe ma ọ bụ kpacha akpụkpọ ahụ gị, ọ dị mma itinye ntụ ntụ ahụ maka ụmụ ọhụrụ, ọ dị mfe ịsa ahụ maka ịga n'ihu.
Nke dị nro na nke na -atọ ụtọ: Ejiri sponge na velor na -adị nro, mmetụta dị nro na nke na -adị nro, nwere ike bulie ma jidekwa ntụpọ kwesịrị ekwesị, ntụ ntụ, na ntụ ntụ ahụ nke ọma, dị mfe itinye n'ọrụ n'otu oge, agaghịzi emebi ntụ ntụ gị.
Enweghị ọmarịcha na ọmarịcha ile anya: Dongshen powder puff nwere ọdịdị okomoko nke na-ebunye ngwaahịa ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla na-enweghị mgbagha etemeete n'okpuru, na enweghị nchekasị na velours ga-ada.
Ọ dị mma maka akpụkpọ ahụ nwere mmetụta: Enwere ike iji afụfụ ntụ ntụ ụdị akpụkpọ ahụ ọ bụla, mmanụ, zuru oke, akọrọ; ha agaghị akpasu ma ọ bụ kpụchaa akpụkpọ ahụ gị, ọ dị mma itinye ntụ ntụ maka ụmụaka.
Ezigbo maka njem na iji ụlọ yana ọ dị mfe iji otu aka arụ ọrụ ebe ọ bụ eriri siri ike na azụ.
Dị nro ma dị nro iji tinye n'ọrụ mgbe ịsachara ahụ. Jiri obere afụfụ nwa a ga -ebelata obere ntụ ntụ na ikuku.
Ọ dị mfe itinye ntụ ntụ n'ahụ ọbụla n'ahụ.
Nwere ike ije ozi maka ma ụmụaka ma okenye.
Ọ dị mfe ihicha ma kpọọ nkụ: a na -asacha igwe, naanị tụba ha n'ime akpa akwa n'ime igwe ịsa ahụ, ma ọ bụ jiri ncha na -asa aka; kpọgidere n'ọnọdụ ikuku ikuku iji mee ka ọ kpọọ nkụ, ọ naghị adị mfe nrụrụ site na ịsa ahụ a na -emebu.
NTANYE! Ebe ọ bụ na ọ dị ọcha na -acha ọcha, ọ dị mfe iji akwa ndị ọzọ tee ya, Biko kewapụ onwe gị na uwe nke agba gbara ọchịchịrị.
Nke gara aga: Dongshen gourd yiri ngwa ngwa ntọala etemeete ogbo blender
Osote: Ọkachamara etemeete dị nro na iku ume ntụ ntụ maka ngwa ntọala
Bath Sponge N'ogbe
Ogbo ịchọ mma
Makeup Ogbo N'ogbe
Aha mkpado mara mma nke Ogbo
Ọkachamara aprịkọt ngalaba nwere etemeete ihu atọ ...
Ladies etemeete mmiri na akọrọ na -agbanwe etemeete ogbo ...
Ọkachamara etemeete dị nro na ntụ ntụ ...
Eco-friendly elastic soft skin-friendly makeup ...
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ,